Sida loogu raaxeysto Android PC-ga USB adoo u mahadcelinaya RemixOS 2.0. Habka rakibaadda tallaabo-tallaabo ee xoqida | Androidsis
Sida loogu raaxeysto Android PC-ga USB adoo u mahadcelinaya RemixOS 2.0. Habka rakibaadda tallaabo-tallaabo ee xoqida
Qoraalka xiga, oo ay igu caawiyeen dhowr casharro fiidiyow ah iyo tallaabo tallaabo, waxaan ku tusi doonaa habka ugu wanaagsan ee lagu raaxeysto Kombiyuutarka Android Mahadsanidiin rakibida RemixOS 2.0 si toos ah Pendrive si aad ugu maamuli karto kumbuyuutar shaqsiyeed ama desktop ama laptop.
Ka hor intaadan sii wadin casharkaan, waa inaad ogaataa taas, si aad u ku rakib kombuyuutar Android PC ah Pendrive mahadnaqa RemixOS 2.0, waxaan u baahanahay kumbuyuutar shaqsiyeed, ama desktop ama laptop oo leh a 64-bit processor, sidaas Kuwa idinka mid ah ee haysta kombuyuutar ku saleysan qaab dhismeedka X86, nasiib daro, ha ku sii wadin casharkaan maadaama uusan idiin shaqeyn doonin. Taasi waxay tiri, waxaan kugu martiqaadayaa inaad gujiso «Sii wad aqriso qoraalkan» halka aan kuugu sheego talaabo talaabo, laga bilaabo xoqida, habka saxda ah ee lagu rakibo Android PC-ka Pendrive mahadnaqa kooxda RemixOS 2.0.
1 Shuruudaha si loo buuxiyo si loo tijaabiyo Android PC mahad RemixOS 2.0
2 Faylasha loo baahan yahay in lagu rakibo RemixOS 2.0 USB
Shuruudaha si loo buuxiyo si loo tijaabiyo Android PC mahad RemixOS 2.0
Hayso kombiyuutar shaqsiyeed leh 64-bit naqshadaha
Hayso pendrive oo leh awoodda ugu yar ee 8 Gb oo leh tiknoolajiyadda USB 3.0 iyo inay awood u leedahay inay xog u qorto 10 mb / s ama ka sareeya.
U hel marinka boot-ka kumbuyuutarkeena si aad wax uga beddesho amarka boot-ka isla markaana u suurtageliso boot-ka USB-ga
Shuruudahaani waa shuruudaha ugu yar ee looga baahan yahay inay awoodaan rakibi Android PC mahad RemixOS 2.0 iyo in khibrada adeegsaduhu ay tahay mid lagu qanco. Kiiskeyga waxaan ku sameeyay Pendrive oo ah farsamada 2.0 iyo xawaaraha qorista ugu badnaan oo aan gaarin 10 Mb / s, gaar ahaan xawaaraha qoraalka wuxuu ahaa 9 Mb / s. Xitaa sidaas oo ay tahay, waan awooday inaan ku tijaabiyo khibrad adeegsade wanaagsan oo wanaagsan inkasta oo la'aanta xawaaraha pendrive-ka ay ahayd mid si muuqata loo dareemay in lagu maamulo RemixOS si fudud.
Faylasha loo baahan yahay in lagu rakibo RemixOS 2.0 USB
Faylka kaliya ee aan ubaahan doono si aan u tijaabino Android PC mahadsanidiin RemixOS 2.0 oo kusalaysan Android 5.1 Lollipop, waa feyl isku duuban oo qaab ZIP ah, oo aan si bilaash ah uga soo dejisan karno bogga rasmiga ah ee RemixOS ee kombuyuutarka adigoo gujinaya isla xiriiriyahan.
Marka feylka culeyskiisu in yar ka badan yahay 600 Mb la soo dejiyey, waxaan ka fureynaa oo aan raaci doonaa tilmaamaha ku jira fiidiyowgaan waxaan kaaga tagay inaad awood u yeelatid ku rakib sawirka nidaamka USB-ga taasi waa awood ka weyn ama u dhiganta 8 Gb
Fiidiyowga kore waxaan ku sharaxayaa habka abuurista USB-ga ee kumbuyuutarka ee loo yaqaan 'Android PC' oo uu ugu mahadcelinayo Remix OS 2.0Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale sharxayaa habka fudud ee loo riixo nidaamka iyo habka boot-ka si markaa xogta loo kaydiyo si sax ah ka dib markay dhammaato kalfadhiga RemixOS 2.0.
Qofkasta oo dhibaato qaba ama ma garanayaan sida loo helo BIOS-ka kombiyuutarka shaqsiga ah taas oo aad rabto inaad ku tijaabiso RemixOS 2.0Kadib waxaan kaaga tagayaa fiidyow aan abuuray waqti dheer kahor kaas oo aan ku sharaxayo sida loo helo BIOS, nidaamka maaraynta bootka ee kumbuyuutarradeena shaqsiyadeed loona sameeyo isbeddelada ku habboon si markaa kumbuyuutarkeenu awood ugu yeesho inuu ka bilaabo USB-ga cusub RemixOs abuuray talaabadii hore.
Ugu dambayn, waxaan kugula talinayaa inaad fiiro gaar ah u yeelato Androidsis maadaama casharka fiidiyowga ee soo socda aan ku bari doono sida loo sameeyo ku rakib adeegyada Google RemixOS Si loo helo keydka rasmiga ah ee loogu talagalay Android, ka Google Play Store, oo si buuxda uga shaqeeya RemixOS inaad awood u yeelatid inaad rakibtid oo aad ka saartid barnaamijyada sida aad ugu rakiban laheyd qalabkeena Android.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sida loogu raaxeysto Android PC-ga USB adoo u mahadcelinaya RemixOS 2.0. Habka rakibaadda tallaabo-tallaabo ee xoqida
Marnaba kama dhigi karin inay bilawdo, waxaan sameeyay 2 isku day 2 kumbuyuutar oo kala duwan waligayna kabaha uma kicin, waxay ku sii jirtaa boodh ay ku qoran tahay ANDROID, waan aqriyay casharka wax walbana waan ku saxay.
Jawaab Darío Madeira
Miyaad horay u hubisay nooca BIOS ee PC-gaagu isticmaalo?
Xaq, hubi nooca BIOS si aad u soo dejiso nooca saxda ah maskaxdana ku hayso in kombuyutarkaagu uu 64-bit yahay haddii kale ma awoodi doontid inaad ka shaqeyso.
Aabo (@ Ayaan0203) dijo
Iima oggolaaneyso inaan ku qaabeeyo Fat32 laakiin fatExt ama wax la mid ah ... iyo NTFS. Taasi waa sababta aanan wali u kicin karin?
Jawaab Gabo0203 (@ Gabo0203)
Adeegso softiweer qaabeynta ah, ama haddii aad taqaanno sida loo adeegsado nidaamka maareynta qaybta Windows, waad ku tijaabin kartaa halkaas.
Google hadda waxay kuu ogolaaneysaa inaad si toos ah ugu rakibto barnaamijyada natiijooyinka raadinta